Aoka ny tenin’Andriamanitra hitombo ao anatintsika – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 février 1, 2013 Laisser un commentaire sur Aoka ny tenin’Andriamanitra hitombo ao anatintsika
« Hianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin’ny fanjakan’ Andriama nitra; fa amin’ny olon-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy fa tsy hahita, ary hahare, fa tsy hahafantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana; Ny voa dia ny tenin’Andriamanitra. Ireo teny amoron-dàlana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy ka hovonjena. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin’ny hafaliana; nefa tsy manampaka ireo, fa mino vetivety ihany, koa amin’izay andro isehoan’ny fakam-panahy dia mihemotra izy. Ireo teny amin’ny tsilo dia izay mandre, fa nony mandeha izy dia voagejan’ny fiahiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan’izao fiainana izao ka tsy mahavanom-boa. Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin’ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana. »
Ao amin’ny Filazan-tsara araka ny Jaona1: 1… , dia manambara mazava ny amin’ny hoe ny Teny no nahariana ny zavatra rehetra, ary ny Teny dia Andriamanitra, ny Teny no nisiam-piainana, ny Teny dia tonga nofo ka niara-nonina tamintsika…. hitantsika amin’ireo andinin-Tsoratra Masina ireo fa tena mavesa-danja ary azo lazaina ho ivon’ny zavatra rehetra ny Teny.
Ny zava-dehibe azo marihina koa dia ny amin’ny finoana ananan’ny olona hiditra amin’ny fiainana mandrakizay. « Ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin’ny Tenin’i Kristy » (Romana 10:17).
Eto amin’ity teksta androany ity dia ambara ho toy ny voa afafy ny tenin’Andriamanitra, ka misy karazany maro ny tany amafazana fa tsy voatery hitovy daholo.
Eto dia mirakitra ny amin’ny zava-miafina ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra izao fanoharana ataon’ny Tompo eto izao ka voalaza fa sarotra ho an’ny olon-kafa ny hamantatra ny amin’izany fanjakan’Andriamanitra izany. Ny fitorian-teny dia fahadalana ho an’izay ho very fa herin’Andriamanitra kosa ho famonjena izay mino.
Nisy ary ny voa voafafy teny amoron-dàlana, ka sady voahitsakitsaka no lanin’ny voro-manidina. Ny làlana tokoa dia toerana fandehanan’ny olona ka tsy maintsy ho voahitsaka raha mba sendra mitrebona aza. Ny làlana dia voahitsaka isan’andro ary dia mihamafy arakaraky ny handehanana aminy, raha toa ka hiasa ny làlana aza ny mpiasa dia tany efa mifatratra tokoa, ny ambara eto dia tany tsy mbola voaasa akory aza. Ka raha nafafy teo ny voa dia tsy tafalentika ny faka, ary mora ho an’ny vorona ny mihinana izany voa izany satria sady tsy misy fakany no miharihary be tsy misy fiafenany. Raha voan-javatra an-tanety voalevina aza dia mbola sokirin’ny vorona ihany hohaniny mainka fa voa miharihary mitsinkasina eny amin’ny làlana. Misy karazana olona tsy manome sandany ny teny henony, ary mety ataony fanitsakitsaka aza izany teny izany. Misy ary ny tena tsy mantsofina hihainoana, izany hoe miditra ao amin’ny sofiny ankavia dia mivoaka amin’ny sofiny ankavanana araka ny fiteny, tsy misy akony mihitsy taminy ny fisian’ny teny teo anatrehany. Koa raha sendra misy iviny kely voarainy aza dia tsaigohan’i Satana izay kely voarainy . Fakam-panahy ho an’i Satana ny mahita ilay teny voahitsakitsaka tsy
noraharahina, ka dia voasarika izy hitsaingoka izany fandrao mety hisy fiantraikany eo amin’ny fiainan’ilay olona nomena izany teny izany raha tavela eo aminy io teny io ka hitarika famonjena ho an’izany olona izany!
Ny voa voafafy teny amin’ny vatolampy: ny zavatra ilain’ny voa mba hampaniry azy dia ny rano, ny sela mineraly sakafo ho entiny mitombo, nofontany hahazoany mamaka tsara, ny hafanana mamelona sy mahahaingana ny fitsiriny sy ny faniriny. Ny vatolampy anefa raha ireo rehetra ireo no jerena dia ny hafanana ihany no mba mety ho entiny, fa raha ny nofon-tany na ny hamandoana, na ny sakafo ho entina hampaniry ny voa dia tsy misy eo aminy ka tsy hisy fakany mihitsy ny zava-maniry. Ny fomba fanirin’ny voa eo ambony vatolampy dia mety ho andro vitsy hiroborobo noho ny hafanana, fa rehefa avy eo dia halazo haingana satria tsy misy fakany sady voadaniky ny andro mahamay. Mampiseho ny olona izay faly mandray ny tenin’Andriamanitra nefa tsy manampaka, ka izay hafaliana kely entin’ny Teny eo amin’ny fiainany dia malady lasa satria tsy tafapaka lalina ao anatiny, ka raha avy ny zava-tsarotra
dia ho kivy (maina) izany olona izany ka ho lavo ary ho faty ho azy ny finoany. Ny fon’ny olona no azo oharina amin’ny vatolampy rehefa tsy mamela ny tenin’Andriamanitra hiditra lalina eo amin’ny fiainany, ary faly fotsiny mandre ny teny fa tsy mamela izany hitombo eo amin’ny fiainany. Izany olona izany dia tsy hahazo famonjena raha tsy miova ny fomba fandraisany ny teny.
Ny voa voafafy teny amin’ny tsilo: Andriamanitra dia manankarena, manankarem-pahasoavana Izy satria Azy ny tany sy izay rehetra eo aminy, Izy no nahary ny tany sy ny lanitra, ary iza no tahaka Azy? Fahasoavana avy Aminy no mbola ahazoan’ny olona famonjena, ary tsy avy amin’ny olona izany. Fomban’Andriamanitra ny manome famantarana hita maso mba hanehoana
amintsika ny hahitantsika Azy na hahafantarantsika Azy, na hahalalantsika ny Aminy. Toy izany ny toerana nahazoan’i Mosesy nihaona taminy, na nanavotan’Andriamanitra ny Isiraely tamin’ny nampitany azy ny Ranomasina Mena, ary indrindra ny iainantsika ny teniny izay hitondrany amintsika
fahasoavana be, ny teny izay entiny hanorenana ny sakramentan’ny Batisa, na ny sakramentan’ny Fanasan’ny Tompo, izay hanolorany ny tenany sy ny ràny ho antsika (mofo sy divay miombona amin’ny teny). Maro ny famantarana efa nataony tamin’ny olony, koa nahoana no mbola gejain’ny tsilo tsy hamoa ny voa nafafy: mbola feno ny fanahian’izao fiainan’izao ny olony ka tsy mamela
ny Teny hiasa hamokatra eo amin’ny fiainany. Marina fa misy ny fahasarotam-piainana, maro ny aretina, tsy vitsy ny olana manjo na dia ny olon’Andriamanitra aza. Fa nahoana no tsy matoky an’Andriamanitra ny olony fa ho gejain’ny fanahiana? Na gejain’ny fahafinaretana, azo raisina sary an-tsaina ilay olona mitaingina fiara-kodia nefa mbola miloloha ny entany ihany! Moa ve tsy tokony hapetraka amin’ny Tompo Jesosy ny entana mavesatra fa efa niteny Izy fa Izy no hanome fitsaharana! Tsy hamela ny olony ho kamboty Izy! Teniny izany.
Ny voa nafafy teny amin’ny tany tsara: raha tsara ny tany hamafazana dia hamoa avy zato heny ny voa afafy. Ny tany tsara dia izay ahitan’ny zava-maniry ny ilainy rehetra, ny sakafo mahavelona azy, ary ho afaka miorimpaka izy, hahazo hamandoana, tsy ho voageja fa voahava tsara.
Ny fon’ny olona mandray tsara ny Tenin’Andriamanitra dia mamela ny Teny hanam-paka tsara, ary hamela ny Teny hiasa eo amin’ny fiainany manontolo. Mitombo andro aman’alina ny fiasan’ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny fon’ny olona izay toy ny tany lonaka, ka tsy hamela izany olona izany tsy hamoa.
Manao ahoana ary ny asan’ny tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao?
Manao ahoana ny fonao mandray ny tenin’Andriamanitra, sao dia toy ny làlana voahitsakitsaka ka mafy tsy afaka mandray ny hafatr’Andriamanitra aminao akory? Sao dia fo feno fanahiana ny amin’izao fiainana izao ka na dia dia Andriamanitra aza no tokony hametrahana ny fahatokisana dia ny tapakazo, na ny fanahy hafa indray no hianteherana ka hivarilavo any amin’ny asan’ny
devoly isan-karazany. Sao dia isan’ireo mandray ny tenin’Andriamanitra amin’ny hafanampo ihany ianao nefa tsy mamela izany hiorim-paka tsara ary tsy ho hita eo aminao ny vokatra antenaina aminao. Te hanao anao ho fanaka tsara ao antokan-trano Andriamanitra anio. Raiso ny Teniny, ka omeo ny toerana sahaza azy eo amin’ny fiainanao, dia hitombo ao anatinao izany teny izany, ary hampamoa anao, sy hampaharitra ny vokatrao.
Andeha ary hanavao ny fanolorantsika ny fon-tsika ho an’i Jesosy Kristy Tompo isika izao anio izao!
Publié parfilazantsaramada février 1, 2013 Publié dansUncategorized
Marina amin’ny ataony Andriamanitra